तनहुँमा शरीरमा थुप्रै सुन लगाएर हिँड्ने एक ब्याक्तिको यसरि लिए ज्यान ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/तनहुँमा शरीरमा थुप्रै सुन लगाएर हिँड्ने एक ब्याक्तिको यसरि लिए ज्यान !
तनहुँमा शरीरमा थुप्रै सुन लगाएर हिँड्ने एक ब्याक्तिको यसरि लिए ज्यान !
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रेबजार निवासी ५३ वर्षीय श्यामबहादुर शाहीको सोमबार घाँ८ टी रे८ *टेर ह८ त्या भएको छ । पहिचान नखुलेको व्यक्ति वा समूहले शाहीको ज्यान लिएको हो ।शाहीको श*व बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित ढुल्ढुङ्गाको झाडीमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवालले जानकारी दिनुभयो । डुम्रेबजारमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका शाही आइतबार रातिदेखि बेप*त्ता हुनुभएको थियो । शाही खोजीका लागि परिवारले प्रहरीमा अनुरोध गरेको थियो । प्रहरी उपरीक्षक सिलवालका अनुसार मृ*तक शाहीको घाँ* टीमा धा*रिलो हति*यारको चोट छ ।
सोमबार माछा मार्न जाने क्रममा स्थानीयवासीले शाहीको श*व देखेपछि प्रहरीमा खबर गरेका थिए । श*व परीक्षणका लागि दमौली अस्पतालमा पठाइएको र घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । घ*टनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सोमबार राति नै पोखराबाट तालीमप्राप्त कुकुर मगाएको छ । आर्थिक प्रलोभनका कारण शाहीको ह८ त्या भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
“घट*नाको अनुसन्धानका लागि कुकुरको सहयोगमा काम शुरु गरिसकेका छौँ”, प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले भन्नुभयो, “शङ्का लागेका केही व्यक्तिमाथि पनि निगरानी बढाएका छाँै ।” यो घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि चाँडै कानूनको दायरामा आउने प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले बताउनुभयो ।
शाही सुनको सौखिन भएको र शरीरमा थुप्रै सुन लगाएर हिँड्ने भएका कारण प्रलोभनले गर्दा शाहीको ह.. भएको हुनसक्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । “चार÷पाँच तोला सुन र रु ४०÷५० हजार उहाँसँग सधैँ हुन्थ्यो”, एक स्थानीयवासीले भन्नुभयो, “त्यही प्रलोभनका कारण उहाँको ह*त्या भएको हुनसक्छ ।”
एकाएक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित राज्यबाट सुविधा लिने सबैको तलब रोकियो
कृष्ण कंडेलको नेतृत्वमा इन्द्रेणी टिम राहात सहित सिन्धुपाल्चोक तर्फ
मास्क नलगाई हिँडडुल गर्नेलाई १०० जरिवानासहित कोरोना प्रशिक्षण पनि